यदि तपाईं बिक्री वा मार्केटिंगमा हुनुहुन्छ भने, अब ताजा गर्नुहोस्! | Martech Zone
यदि तपाईं बिक्री वा मार्केटिंगमा हुनुहुन्छ भने, अब ताजा गर्नुहोस्!
बुधबार, सेप्टेम्बर 24, 2014 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो हरेक हप्ता हुन्छ। मँ विक्रेता वा सम्भावनाबाट ईमेल प्राप्त गर्दछु र हामी सँगै कुरा गर्न मिति पनि काम गर्दछौं। म तिनीहरूको साइट जाँच गर्दछु र हेर्छु कि यो फिट छ कि छैन। म तिनीहरू संग पनि जडान हुन सक्छ LinkedIn उनीहरूको बारेमा थोरै सिक्न। मिति सेट गरिएको छ, क्यालेन्डर आमन्त्रित स्वीकार गरीएको छ र म अगाडि बढ्छ।
केहि हप्ता जान्छ र एक चेतावनी एक व्यक्ति संग पप अप हुन्छ। म नाम चिन्दिन, त्यसैले म डोमेनलाई हेर्छु उनीहरूको ईमेल ठेगाना बाट हो। यदि म भाग्यमानी छु, यो उनीहरूको कम्पनी हो। यदि म हैन भने, म पेचमा छु। म तिनीहरूको साइटमा हेर्छु र यसले मेरो मेमोरीलाई हप्काउँछ र अब मैले पत्ता लगाएँ कि तिनीहरू को थिए र उनीहरू के चाहन्छन्। यदि म भाग्यमानी छु।
मसँग राम्रो मेमोरी छैन (यो विज्ञान हो!) त्यसैले मलाई यो जस्तो सुरागहरू चाहिन्छ। कहिलेकाँही मैले इभर्नोटमा केहि नोटहरू लेख्दछु, कहिलेकाहि क्यालेन्डर घटनामा, अन्य पटक म विश्वास गर्दछु कि मँ सम्झन्छु ... तर मँ गर्दैन। दुर्लभ अवसरहरूमा व्यक्ति मेरो अफिसमा हिंड्छन् र मसँग उनीहरूले को हो वा उनीहरू त्यहाँ किन छन् भनेर मलाई थाहा छैन त्यसैले म नाच खेल्छु ... उनीहरूलाई के काम गरिरहेको छ, कसरी जाँदैछ, आदि बारे सोध्नुहोस्… केहि पनि मेरो स्मृति जोग गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्।
त्यहाँ अन्तमा एक उपचार छ! ताजा एक मोबाईल र वेब अनुप्रयोग हो जुन तपाईलाई कसैको लागि खोजी गर्न र तिनीहरूको प्रोफाइल हेर्न र तपाईसँग उनीहरूसँग भएको कुनै पनि संचार पाउन अनुमति दिन्छ - यो ईमेल वा सामाजिक माध्यमबाट हो।
सबै भन्दा राम्रो, अनुप्रयोग पनि तपाइँको लागि पूर्व र पोष्ट सचेतहरूको साथ आउँदछ। १ 15 मिनेटमा मिटिंग पाउनुभयो? तपाईंले एक नोट पाउनुहुनेछ जो यो हो को हो, तपाईंले उनीहरूसँग अन्तिममा के कुरा गर्नुभयो, र यसले तपाईंलाई उनीहरूको बारेमा टिप्पणीहरू बनाउन पनि अनुमति दिन्छ। यो म जस्तै मानिसहरु को लागी एक ज्ञान को आधार हो जुन आफ्नो कुकुर (Gambino) को बाहेक अरु कसैलाई सम्झन गाह्रो हुन्छ।
यो शानदार छ। यो सुन्दर छ। यो काम गर्दछ। अब साइन अप गर्नुहोस् र तपाईं आफ्नो ईमेल खाताहरू, तपाईंको सामाजिक खाताहरू र Evernote जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को पटक तपाईले मसँग भेटको समय मिलाउनुपर्दा म धेरै कम अप्ठ्यारो मान्न सक्छु!
अद्यावधिक: सेल्सफोर्स सुरू भयो को लागी ताजा!
रिफ्रेशलाई हेर्नको लागि उनीहरूको समाधानलाई प्रत्यक्ष रूपमा बिक्रीफोर्समा एकीकृत गरिएको छ, विक्रेताहरूका लागि उनीहरूको नेतृत्व, साझेदार र ग्राहकहरूको जानकारी पहुँच गर्न एक उत्तम उपकरण।
टैग: मान्छे खोज्नुहोस्LinkedInमाथि हेरमार्केटिङनामनेटवर्कमान्छेताजाताजा अनुप्रयोगताजा गर्नुहोस्बिक्री सक्षमताबिक्री बलसेल्सफोर्स अनुप्रयोगसामाजिक सञ्जालमान्छे हेर्नुहोस्
सेप्टेम्बर 27, 2014 मा 11: 21 AM
यो धेरै राम्रो लाग्दछ। मैले धेरै चोटि लगईन गर्न (सिर्जना गर्ने र खाता) प्रयास गरेको छु र यो असफल रहन्छ।
मलाई लाग्छ तिनीहरू 99 XNUMX% मोबाइल छन्।